जीवन भट्टराई - Saptahik Magazine
जीवन भट्टराईका लेखहरु
खडानन्द र सालीको गफ ।खडानन्द : मै मुर्ख हुँ, तिम्लाई छोडेर तिम्री दिदीसँग विवाह गर्ने ।साली : अँ, मलाई त अन्धी नै सम्झिनुभो कि क्या हो भिनाजु ? दिदीलाई हेर्‍या बेला मैले चाहिं तपाइलाई देख्या थिइन र ????
खडानन्दका ससुरासार्‍है माया गर्थे खडुलाई । उनको मृत्युपछि टेन्सन भइरा’को थ्यो खडानन्दलाई । मलामीका साथ हिंड्दै थिए खडानन्द ।
खडानन्द कक्षामा पढाउँदै थिए । खडानन्द : हाम्रा पुर्वजहरू बाँदर थिए ।एक विद्यार्थी : ओए बिर्खे, सुनिस् ...? हामी त सरलाई पहिलेदेखि नै भन्थ्यौं नि, आज सरले आफ्नै मुखले भन्नुभो ।
हट र कुलबाट मनतातो बच्चा जन्मन्छ
जीएफ : तिमी कुल छौ खडु ।खडानन्द : तिमी पनि त हट छौ नि ।(अलि पर्तिर एक जना बूढा उनीहरूको कुरा सुनिरहेका रै’छन्)बूढा (छेउमा आएर) : तिमेरु दुवै जना बिहे गर नानीबाबु हो, बच्चाचाहिँ मनतातो जन्मिने रै’छ ।
खडानन्द र साथीसाथी : ससुराली जाँदा किन ज्वाइँको यति धेरै इज्जत गरिन्छ ?खडानन्द : किनभने हाम्रो मुलुकमा सहिदको इज्जत धेरै गरिन्छ ।
खडानन्द साँझपख पार्कतिर यसो हावा खान निस्क्या थिए । दुई जना युवा–युवती रूखको पछाडि छलिएर गफ गर्दै थिए ।खडानन्द (छेउमा गएर) : के, यो हाम्रो संस्कार हो त नानी ?युवती : हैन हजुरबा, उ त शर्मा अंकलको छोरा सालिकराम पो हो त ...!!
खडानन्द : उफ्... यो गर्मीले पनि मासेरै छोड्ने भो । पत्नी : धन्दा नमान खडु, आज तिम्रा लागि मैले स्पेसल चिज पकाएकी छु । त्यो खानेबित्तिकै गर्मी गायब... । खडानन्द : ओहो † हो र ?... के बनायौ त्यस्तो ? पत्नी : नवरत्न ठण्डा–ठण्डा तेलमा तारेको पकौडा... ।
खडानन्द : रक्सी जाँड, जुवातास, सबै नशा हुन् । यिनीहरूले मानिसलाई नराम्रोसँग बिगार्छन् । ल भन् त बिर्खे, सबैभन्दा धेरै नशा केमा हुन्छ ?बिर्खे : किताबमा सर खडानन्द : कसरी ?बिर्खे : किताब खोलेर पढ्न थाल्नेबित्तिकै झपझपी निन्द्रा लाग्छ सर त्यसैले ....!!
खडानन्दको छोरीसँग ब्वाइफ्रेन्ड
ब्वाइफ्रेन्ड : के तिमी मसँग बिहे गछ्र्यौ ? खडानन्दकी छोरी : छि: यो त साह्रै पुरानो तरिका भयो, नयाँ तरिकाले प्रपोज गर न !ब्वाइफ्रेन्ड : ल ठिक छ, के तिमी मेरो छोरालाई, तिम्रो लासमा आगो झोस्ने मौका दिन तयार छौ .......???
खडानन्दले भर्खर–भर्खर जागिर खान थालेका थिए, लुखुर–लुखुर गर्दै ११ बजे अफिस पुगे । म्यानेजर (रिसाउँदै) : के हो खडानन्द यो पारा ? यही हो अफिस आउने बेला ? कता थियौ यत्रो बेर ? खडानन्द : ‘गर्लफ्रेन्ड’ लाई कलेज छोडेर आएको सर, अनि ढिलो भयो । म्यानेजर : म अरू कुरो जान्दिनँ, भोलिदेखि टाइममा अफिस आउने !खडानन्द : ठीक छ नि त सर, त्यसो हो भने आफ्नी छोरीलाई आफ्नै मोटरसाइकलमा कलेज पुर्‍याइदिनुस् है भोलिदेखि ..........!!